Etechọpụta pịa wayo ka ọ na-eme - Mgbe ị jiri nlezianya soro mgbasa ozi gị, ị nwekwara usoro nlekota ha na-enyocha ogo nke mgbasa ozi ọ bụla, 24 awa n'ụbọchị. Ma ọ bụ oke na-abụghị ịtụgharị clicks si mba ụfọdụ, ma ọ bụ onye asọmpi na ịpị mgbasa ozi gị, Mma nwere ike ịchọpụta ma gwa gị nke ọrụ enyo ozugbo.
Gbochie ma gbochie cliclic wayo - Ndị asọmpi na ndị mmekọ na ịpị mgbasa ozi gị iji kpoo mmefu ego gị nwere ọtụtụ ihe ga-efunahụ ma ọ bụrụ na ejide ha ma kọọrọ ha. Jiri nwayọ na-eme ka ha mata na ị maara ọrụ ha site na izipu clicks na-enyo enyo na ibe ịdọ aka na ntị kama weebụsaịtị gị. Anyị na-enyekwa ha adreesị IP ha na ntuziaka iji gbochie mgbasa ozi Google ma ọ bụ Bing gị ka a ghara igosi ha ha n'ọdịnihu.
Ngosipụta: Anyị na-egosipụta njikọ njikọta na post post a. I nwekwara ike ahu nagide Mma na Segment.io